नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : कोरोनाका कारण नेपालमा दैनिक दश भन्दा बढीको मृत्‍यु तर समाचार कसले सुन्ने !
कोरोनाका कारण नेपालमा दैनिक दश भन्दा बढीको मृत्‍यु तर समाचार कसले सुन्ने !
नेपालमा गत २४ घण्टामा ५९१ जना संक्रमित भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर ९ हजार ६ सय ९७ जनाको नमूना परीक्षण गर्दा ५९१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । मन्त्रालयका अनुसार २४ घण्टामा ९३७ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् भने ९ जनाको मृत्यु भएको छ । नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ११ हजार ८ सय ७४ छ । उपत्यकाका काठमाडौंमा २०३, ललितपुरमा ४१ । भक्तपुरमा ३० जना संक्रमित भएका छन् ।
यसै बिच कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लक्षित जनसङ्ख्याभन्दा बढीलाई लगाइएको छ । नेपाल सरकारले यही असोज मसान्तसम्म लक्षित जनसङ्ख्याको कम्तीमा पनि एक तिहाइलाई यो खोप लगाउने लक्ष्य लिएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले असोजमसान्तमा लक्षित जनसङ्ख्यामध्ये ३३ प्रतिशतलाई खोप लगाउने लक्ष्य राखेकामा उक्त लक्ष्यभन्दा बढीलाई नै खोप लगाएको सो मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।